किन पर्छ कपालमा चाया ?
पुस १०, २०७३ आइतवार २३:१९:०० प्रकाशित
हाम्रो तालुका छालाहरू मर्ने र नयाँ पैदा हुने क्रम निरन्तर चलिरहेको हुन्छ । यसरी तालुमा छालाहरू मर्ने र नयाँ पैदा हुने क्रम जारी रहँदा टाउकोमा सेता–सेता मसिना फुस्रा दागहरू देखिन थाल्छन् जसलाई हामी चाया भन्ने गर्छौ । मानिसहरूमा बढी चाया प¥यो भने अरूको अगाडि लाजमर्दो स्थिति पैदा हुने, आत्मविश्वास गुमाउने र आत्मबल पनि कमजोर हुने अवस्था आउन सक्छ ।
चाया पर्ने कारणहरू
– चाया पर्नुको ठोस र सही कारण अहिलेसम्म पनि पत्ता लागेको छैन । तर छालासम्बन्धी धेरै विशेषज्ञहरू के कुरामा सहमत छन् भने हाम्रो तालुमा पिटिरोस्पोरम ओभली नामक फङ्गसको मात्रामा वृद्धि भयो भने चाया पर्न सक्छ ।
चाया कसलाई पर्न सक्छ ?
चाया जुनसुकै उमेरमा बढी देखापर्छ । तर यो विशेष गरेर १२ देखि २० वर्षको उमेरमा बढी देखापर्छ । सामान्यत ः जाडो मौसममा यसले बढी सताउने गर्छ।
चाया पर्नुमा निम्न केही कारण छन् -
– चिल्लो कपाल पदार्थ उत्पादन भयो भने चाया पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
– केही निश्चित रोगहरू : यसबारे ठोस कारण पत्ता लागिसकेको छैन तर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर मानिसमा बढी चाया पर्ने गर्छ ।
चायाका अन्य सम्भावित कारणहरु
- हर्मोनमा हुने परिवर्तनहरू
- कम नुहाउने जस्ता अस्वस्थ बानीहरू, टाउकोमा धेरै पसिना आउने समस्या, अस्वस्थ खानपिन, कपालमा विभिन्न खाले रसायन तथा विद्युतीय उपकरणहरूको अत्यधिक प्रयोग, चिसो वातावरण तथा घरभित्र तातो बनाउन पारिएको सुख्खा वातावरण
- लामो समयदेखिको तनाव, थकान तथा चिन्ता
- एलर्जी वा हाइपरसेन्सिटिमिटी
चायाको उपचार कसरी गर्ने ?
उपचारबिना नै पनि चाया हट्न सक्छ । चायाको उपचारका लागि बजारमा औषधियुक्त धेरै स्याम्पु पाउन सकिन्छ ।
चाया परेका मानिसहरूले छालाको कसरी स्याहार गर्ने ?
चायालाई पूरै निर्मूल गर्न सकिन्न तर यसको असरलाई निश्चित रूपमा कम भने गर्न सकिन्छ । यसका लागि निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ :
- तनावलाई कम गर्ने ।
- नियमित रूपमा कपाल स्याम्पुले धुने ।
- कपाललाई सज्जा गर्ने विभिन्न खाले रसायनयुक्त साधनहरूको प्रयोग नगर्ने ।
- स्वस्थ खानेकुरा खाने । विशेष गरेर जिङ्क ‘बी’ समूहका भिटामिनहरू र फ्याटी एसिड भएका खानेकुरा खाने ।
- चर्को घामबाट बच्ने ।
तलका समस्या देखापरे डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्छ :
- यदि तपाईंको तालु रातो भयो, चिलाउन थाल्यो, त्यहाँबाट रगत आयो वा पोल्न पनि थाल्यो वा यस्तै समस्या अनुहारमा पनि सर्न थाल्यो भने ।
- यदि तालुको केही भागमा छाला खुइलिन थाल्यो, छालाको संवेदनशीलता मर्न थाल्यो र यस्तो समस्या तालुका विभिन्न भागहरूमा देखापर्न थाल्यो भने ।
- धेरै मात्रामा कपाल झर्न थाल्यो भने ।
- डा. गैरे ग्राण्डी अस्पतालमा कार्यरत छन् ।